Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United ayaa ku dhowaatay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League, kaddib markii ay Garaacday Kooxda Kubadda Cagta ee Aston Villa oo ay ku garaacday 3-0.
Guusha ay gaartay Kooxda Kubadda Cagta ee Manchester United ay ku hoggaamiyeen Xidigaha Bruno Fernandes, Mason Greenwood iyo Paul Pogba ayey dhibic kaliya ugu jirsatay kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Leicester City, halka ay Chelsea oo saddexaad fadhidana laba dhibcood ka hoosayso.
Qaybta labaad ayay Manchester United ku bilowday gool uu dhaliyey Marcus Rashford, laakiin waxa diiday garsooraha ciyaarta maadaama uu offside ku jiray Paul Pogba oo kubadda u qariyey goolhaye Pepe Reina, laakiin xiddiga reer France ayaa inyar kaddib goolka soo celiyey, waxaana uu shabaqa ku hubsaday kubbad uu ka toogtay bannaanka xerada ganaaxa. Aston Villa ayaa samaysay fursaddii ugu horreysay ee ciyaarta, waxaana kubbad ay kasoo xoogsadeen Pogba oo badhtamaha garoonka joogay, waxaana bannaanka xerada ganaaxa goolka ka toogtay Trezeguet, taas oo iyadoo aanu De Gea taaban kusoo dhacday birta.
Mason Greenwood ayaa kubbad uu ka toogtay masaafo 20 yard ah waxa uu ku hubsaday shabaqa uu waardiyaha ka yahay Reina oo gaadhi kari waayay. Ka hor kubadda waxa isku soo dhiibay Martial iyo Ferrnandes oo usii gudbiyey Greenwood. Goolkan ayaa dhashay daqiiqaddii 2aad ee dheeraadka ah ee lagu daray qaybta hore.
Rashford ayaa kubbad ka soo leexiyey dhinaca bidix isaga oo si toos ah u toogtay goolka, waxaanay kasoo baxday goolhaye Reina laakiin waxa Pogba ayaa ku jira offside isla markaana u qariyey goolhayaha, halka la tuhmay inay kubadduna sii taabatay.
Daqiiqad kaddib goolka la diiday ayuu Paul Pogba kubbad uu ka toogtay masaafo 20 yard ah dhex dhigay goolka Aston Villa iyadoo aanu Reina is-dhaqaajin. Fernandes ayaa kubaddan uga soo dhiibay dhinaca midig.
W/Q Max`ed Xasan Nuur Jillibeey
Previous Kooxda Kubadda Cagta ee Man City Oo Xasuuqday Newcastle
Next Kooxda Kubadda Cagta ee Real Madrid Oo Ku Guulaystay Horyaalka La Liga Dalka Spain